eParewa || Peace and Prosperity » म १८ वर्षीया विवाहित युवती हुँ, पहिलो पटक यौनसम्पर्कमा मेरो रगत आएन ।
म १८ वर्षीया विवाहित युवती हुँ, पहिलो पटक यौनसम्पर्कमा मेरो रगत आएन ।
२०७५ माघ १३ गते आईतबार ०९:००
म १८ वर्षीया विवाहित युवती हुँ। भनिन्छ, जब एक भर्जिन युवतीले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्छिन्, रगत आउँछ, जुन कुमारित्वको संकेत वा प्रमाण हो, तर मेरो रगत आएन। यो कसरी हुन्छ ? कसलाई यस्तो हुन्छ र कसलाई हुँदैन ? विशेष गरेर युवतीको कौमार्य...
कुनै-कुनै युवतीको योनिच्छद जन्मजात नै नहुन सक्छ वा त्यसको राम्रोसँग विकास नभएको हुनसक्छ। प्रथम यौनसम्पर्क हुनुपहिले नै कतिपय युवतीमा शारीरिक क्रियाकलापका दौरानमा योनिच्छद च्यातिन सक्छ। भनिन्छ, खेलकुदमा भाग लिंदा, घोड्चढी गर्दा, साइकल चढ्दा वा अन्य व्यायामका कारण योनिच्छद च्यातिन सक्छ। अहिले विवाहको उमेर पछिल्तिर धकेलिएको छ, त्यसैले कैयौं किशोरी वा युवतीले हस्तमैथुनको माध्यमवाट आफ्नो यौनेच्छा पूरा गरेका हुन्छन्। त्यस क्रममा कतिपयले औंलाका साथै अन्य वस्तुको प्रयोग गरेका हुन सक्छन्। त्यसैले कतिपय युवतीले हस्तमैथुन गर्ने क्रममा आफ्नो योनिच्छद च्यात्न सक्छन्। त्यसैले कुनै युवती पूर्ण रूपमा कुमारी भए पनि अर्थात् यौनसम्पर्क नै नगरेको भए पनि पहिलो यौनसम्पर्कका बेला पटक्कै रगत नआउन वा कुनै पीडा नहुन सक्छ।
प्रकाशित मिति २०७५ माघ १३ गते आईतबार ०९:००